Ulwandle Ngosuku - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnita
I-ambience yeCaribbean yenziwe kwakhona kule 1,600 sq. indawo yeenyawo NW yeKearney. Ipropathi ihleli phakathi kwethafa laseNebraska elinemibono emangalisayo yokuphuma kwelanga, ukutshona kwelanga, kunye nokuphuma kwenyanga. Ikufuphi nedolophu enofikelelo olulula lwendlela ekuthengeni nakwizinto ezenziwayo, kodwa ikude ngokwaneleyo kubumfihlo kunye nokuzola okufunwa ngabahambi abaninzi.
Ubuhle obuzolileyo beCaribbean bubuyisela uthando lomnini wePisces yelanga, ukusefa, kunye nesanti. Nceda ufunde lonke uphononongo lweendwendwe lwangaphambili ukuze uqinisekise ukuhonjiswa okukhethekileyo, intuthuzelo, ukuphumla, kunye nezinto eziluncedo ezibonelelwayo.
Ndingathumela iividiyo zepropathi ukumelwa okuchanekileyo ngakumbi kobuhle, intuthuzelo, kunye nobubanzi bepropathi.
Umgangatho ophambili owahlukanisiweyo unegumbi lokulala elongezelelweyo elinebhedi enkulukazi, ibhafu epheleleyo, ikhitshi, igumbi lokuhlala (elinomandlalo wekumkanikazi opholileyo kwi-sofa yokukhupha), kunye nomgangatho obanzi onegrisi yegesi, indawo yokuhlala eyakhelweyo, itafile kunye nezitulo. Esi sithuba sinokufumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo.
Ukuzola kwethafa liphazanyiswa kuphela ngamava amnandi okubethwa kwempempe kaloliwe ngamaxesha athile ukusuka emazantsi. Indlela egangathiweyo yokufikelela kwindawo yokuthenga esemantla kunye nekhampasi yase-UNK -- imizuzu eli-10 kwicala ngalinye.
Ndiyafumaneka ngoncedo kunye/okanye ukusebenzisana, ukuba ndiyafuneka. Ngaphandle koko, iindwendwe zinobumfihlo obupheleleyo.